Sonos Beam, ụlọ ọrụ ahụ na-ewebata ihe ngosi ụda smart smart Amazon | Akụkọ akụrụngwa
Sonos Beam, ụlọ ọrụ ahụ na-ewebata ụda ụda smart smart Amazon
Ruben gallardo | | Ndị na-ekwu okwu
Y’oburu na ikwusi itughari uche, ndi nile mara okwu anyi mara na ya na ha nwere ochicho. Otú ọ dị, e nwere ọtụtụ ụdị ndị na-ekwu okwu. Na, karịa ihe niile, ruo oge ụfọdụ ugbu a, ụdị usoro ụda na-emeri emeri n'ime ime ụlọ: Ogwe ụda.
Sonos chọrọ iji ụda ụda banye n'ọhịa a Sonos doo. Ihe nlereanya a, na mgbakwunye na inye ụda dị elu, dịkwa mma. Ma ọ bụ na ọ dakọtara na ọtụtụ ndị enyemaka na-enyere aka. N’agbanyeghi na mbu, onye meriri n’egwuregwu bu Amazon Alexa.
Enwere ike ịnweta Sonos Beam na agba abụọ dị iche: nwa ma ọ bụ ọcha. N'otu aka ahụ, dịka anyị gwaworo gị, igwe onyonyo amamịghe a chọrọ itinyekwu ndị enyemaka na-enyere aka ma na ntọhapụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ọ na-egosi-maka ọdịnihu- aha Google Assistant. Ka ọ dị ugbu a, onye ọrụ ga - enwe ọkà okwu nwere a 65 mm ogologo nke na nke ahụ na-enye ụda gbara gburugburu iji ruo n'akụkụ ọ bụla nke ime ụlọ.
Ka ọ dị ugbu a, ọbụghị naanị na anyị nwere ike ịnụ ụtọ ụda nke sitere na telivishọn ọhụụ ọhụụ, kamakwa anyị nwere ike izipu ụda site na ọrụ egwu ọ bụla na gụgharia - Ihe karịrị ọrụ 80 n'ozuzu ya—. N'aka nke ọzọ ga-arụ ọrụ site na iwu olu. Nke ahụ bụ, na dị ka egosiri na ihe atụ ahụ, ị ​​nwere ike ịjụ onye enyemaka Amazon ka ọ chọọ usoro na Netflix, gbanye telivishọn ma ọ bụ kwụsịtụ ọkpụkpọ. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ị chọrọ ị ga-enwe ihe akara ọwa: na ime akara, na ngwa Sonos, si ngwa music ị na-eji ma ọ bụ site na aka emetụ bọtịnụ na n'elu ya Chassis.
Sonos na-adụ ọdụ na July nke afọ a 2018, na site na nwelite nke software, ụfọdụ ndị otu ha ga-enweta ike iji Apple si airplay 2 ọkọlọtọ. Ma ọ ga-abụ otu July —Ihe akọwapụtara kpọmkwem na 17th- mgbe Sonos Beam a na-ere ya, ọnụ ahịa ya dịkwa 449 euro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Foto na ụda » Ndị na-ekwu okwu » Sonos Beam, ụlọ ọrụ ahụ na-ewebata ụda ụda smart smart Amazon
Egwu na akwụkwọ n'efu na ndenye aha Amazon Prime
AMD zara akwara Intel na ọgbọ nke abụọ Threadripper na 32 cores